Ny IEEE an'ny 802.11 dia ny fianakaviana ny fitsipiky ny IEEE ho wireless faritra an-toerana ny tambajotra (WIFI) fa efa toy ny tanjona mba hanitatra ny 802.3 (Ethernet, ny tena fahita protocol for nampifandraisina mivantana ny tambajotra ny solosaina) ho amin'ny wireless faritra. Ny fitsipika an'ny 802.11 dia matetika fantatra amin'ny anarana hoe "WiFi" satria ny WiFi Fifanarahana, fikambanana iray tsy miankina ny mpanao ihany, dia manome taratasy fanamarinana ho an'ny vokatra latsaka ao anatin'ny fepetra arahana an'ny 802.11. Ity fianakaviana ity ny protocols dia tsara orina orinasa fitsipika eo amin'ny sehatry ny wireless faritra an-toerana ny tambajotra.
Ny anarana WiFi no ampiasaina mba mamantatra WLAN fitaovana mifototra amin'ny famaritana IEEE an'ny 802.11 b/g/n sy emitting amin'ny peo ny 2.4 GHz. Na izany aza, ny WiFi dia nahery ka toy ny hoe miresaka amin'ny ankapobeny amin'ny wireless faritra an-toerana ny tambajotra. Ny mahazatra dia ny fampiharana ny fanomezana ny wireless fahafahana miditra amin'ny Aterineto, internet telephony (VoIP) sy interconnection eo amin'ny fitaovana elektronika toy ny fahitalavitra, digital cameras, DVD mpilalao sy ny solosaina. Amin'ny portable ireo fitaovana elektrônika ny an'ny 802.11 mahita ny fampiharana wireless fifindran'ny, toy ny.x. mba hamindra sary avy amin'ny fakan-tsary nomerika ny solosaina ho fanodinana bebe kokoa sy ny fanontam-pirinty, na ao amin'ity faritra ity dia efa superseded ny protocol Bluetooth ho an'ny be fohy isan-karazany ny wireless tambajotra manokana.
2 Ny fomba fiasa
2.1 PCF sy DCF
2.2 Mivezivezy nodes
2.3 Ny fiarovana
2.4 Ny firafitry ny endriny
3 Ny dikan-teny
4 Ny loharanom-baovao
Tamin'ny 1999, ny an'ny 802.11 b niteraka ny hafainganam-pandeha ny 11 Mbps mampiasa DSSS. Ny taha ny fiasan'ny 1-2 Mbps amin'ny DSSS dia mbola manan-kery, ka ny fitaovana dia mety latsaka ao ambany ny hafainganam-pandeha mba hihazonana ny fifandraisana rehefa famantarana dia tsy manan-kery. Miaraka amin'ity boky ity, ny teny hoe WiFi nanomboka ho ampiasaina be sy ny wireless tambajotra karatra an'ny 802.11 niely haingana dia haingana.
Mampiasa ny fomba fampitana Orthogonal Matetika Fizarana Multiplexing (OFDM), roa ny fenitry ny hafainganam-pandeha avo, nanaraka ny an'ny 802.11 b, izay manome hatramin'ny 54 Mbps: an'ny 802.11 ny mampita ao amin'ny matetika tarika ny 5GHz, fa tsy mifanaraka amin'ny wireless tambajotra karatra izay manohana an'ny 802.11 b, raha an'ny 802.11 h mampita ao amin'ny matetika tarika ny 2.4 GHz ary dia nihemotra mifanaraka amin'ny an'ny 802.11 b. Ny fifandraisana eo amin'ny fitaovana ampy fitaovana amin'ny karatra an'ny 802.11 b sy ny an'ny 802.11 h dia atao eo amin'ny ambony indrindra azo atao mahazatra ny hafainganam-pandeha, fa ny an'ny 802.11 b.
Noho ny fihanaky ny WiFi ao ny fiandohan' ny taona 2000 nisy niseho fomba vaovao ny fahafahana miditra amin'ny Aterineto: ny fitaovana nomerika amin'ny wireless tambajotra karatra WiFi, ho.x. ny solosaina na ny PDA, dia mety ho mifandray amin'ny Internet rehefa izany dia ao anatin'ny fandrakofanay ny wireless tambajotra izay efa mifandray amin'ny Internet, izay antsoina hoe ny fidirana amin'ny teboka (Access Point). Faritra iray izay rakotry ny iray na maromaro ny fidirana hevitra mifandray amin'ny tsirairay, dia antsoina hoe hidirana. Ny hidirana afaka handrakotra ny faritra ny faritra na trano, sy ny maro metatra tora-droa, alternating amin'ny lafiny amin ' ny fidirana.
Toy izany koa ny WiFi ny teknolojia dia mamela ny fifandraisana eo amin'ny roa fitaovana eo amin'izy ireo, ny fifandraisana ny solosaina manokana amin'ny faritra misy tambajotra sy ny solosaina hafa, ary avy eo dia amin'ny alalan'ny azy ireo ny Aterineto. Ny azo nafindrafindra solosaina afaka mifandray na aiza na aiza misy ny access point (e.x. ao amin'ny valan-javaboary na efamira ny tanàna lehibe, trano fisotroana kafe, trano famakiam-boky, sns.).
Ny fomba fiasaHanova
Ny an'ny 802.11 manohana fomba roa ny miasa: mpiara-to-toerana dia tsy misy ny foibe toby fiantsonana-access point, ny nodes dia mitovy, ary ny fahazoana ny mahazatra fitaovana (ny habakabaka) dia voafehin'ny ny zaraina arofenitra toy ny CSMA (izy ireo mba hiasa ny ad-hoc WIFI), sy ny access point, ny foibe node ao amin'ny tambajotra an-toerana-matetika mifandray amin'ny wired hazondamosina network (e.x. eo amin'ny Aterineto na eo amin'ny lehibe Ethernet LAN)- izay mihevitra ny fanaraha-maso ny fidirana ho any amin'ny nizara antonony ary miasa toy ny bi-directional repeater. Ny WIFI amin'ny access point, antsoina hoe foto-drafitrasa ny tambajotra, na dia narafitra (fotodrafitrasa). Ny fitsipika modely izay milazalaza toy izany ny tambajotra dia ireto manaraka ireto: misy ny tsy manana hazondamosina network (distribution system, DS) izay ny fidirana hevitra (AP). Vondrona iray iraisana ny nodes (STA) fa mifandray wirelessly amin'ny manokana AP manokana matetika dia antsoina hoe ny Fototra Hametraka ny asa Fanompoana (BSS). Ny BSS dia mifandray akaiky amin'ny alalan'ny DS. Ny STA ny BSS mety tsy ho izy rehetra isan-karazany ny rehetra fa tena mila anao ny zava-drehetra ho amin'ny isan-karazany ny access point.
Rehetra protocols an'ny 802.11 x efa mahazatra ny zana-sosona MAC sy ny samy hafa ao amin'ny haino aman-jery ara-batana. Ny zana-sosona LLC, tompon'andraikitra amin'ny mikoriana fanaraha-maso, ny fahadisoana fanaraha-maso, ary ny interface tsara ny tambajotra sosona, dia mitovy ihany ny amin'ny tsara orina mahazatra protocol for 802.2 no ampiasaina sy ny Ethernet ary indrindra izay nampifandraisina mivantana eo an-toerana faritra tambajotra -amin'ny vokatra fa tsy mivantana sy tsy mila ny fiovam-po fifandraisana ho an'ny 802.11 WLAN amin'ny Aterineto na hafa WAN/aterineto izay mampiasa ny adiresy IP ho toy ny tambajotra arofenitra. Ny fototra protocol, MAC an'ny 802.11 no DCF, izay mifototra amin'ny fomba CSMA/CA, raha mbola ao ilay drafitra WLAN ny DCF ny fanampiny protocol PCF izay, manararaotra ny AP manolotra ny terminal raha mila mahazo ny vahoaka ny haino aman-jery tsy misy fifaninanana sy ny ady.
Ny angona famindrana tahan'ny amin'ny an'ny 802.11 dia miankina amin'ny ny elanelana eo amin'ny nodes. Lavitra no wireless fitaovana avy ny access point, ny ambany ny hafainganam-pandeha. Koa, noho ny fampiasana ny CSMA/CA fa tsy CSMA/CD, ny tena throughput dia tsy mihoatra ny antsasaky ny anarana hafainganam-pandeha: 54 Mbps ao ny ara-batana sosona, raha ny marina, tsy hihoatra ny 27 Mbps ao amin'ny LLC. Ankoatra izany, ny fidirana dia manondro fa manohana ny mifangaro tambajotra b sy h azo indray mitete ny throughput amin'ny 18 Mbps, tamin'ny voalohany, mba hahatratra ny 6 ny 9 Mbps rehefa nahatsapa ny mpanjifa.
PCF sy DCFHanova
Ny DCF manome vahaolana, raiki-tampisaka amin'ny wireless fifandraisana, ny olana ny miafina terminal sy ny sarona ny terminal, izay no antony izay tsy azo ampiharina ny fomba CSMA/CD ny Ethernet ny WLAN. Ny olana amin'ny zavatra tsy misy fanafany intsony ny lainga ao ny zava-misy fa raha ny terminal C dia ny fampitana ny terminal B, hafa terminal Iray te-handefa tahirin-kevitra mba B fa avy isan-karazany ny C dia tsy mahita fa ny fantsona dia be atao, ary dia ataon-drizareo. Ny mifanohitra amin'izany olana ny sarona ny terminal dia ny terminal dia mety tsy mamindra-javatra hafa terminal B, mieritreritra fa ny fantsona dia variana satria fantariny raha misy ny fifindran'ny avy amina terminal C ny terminal D. C sy D fa avy isan-karazany B, ka raha ny marina izany dia tsy ho amin'ny ady.
Ireo olana ireo dia matetika tapa-kevitra ny ho tratra ny virtoaly fantsona (jereo boaty RTS sy ny CTS) fa dia mihazakazaka ny DCF: ny foibe hevitra ao ambadiky ny hetsika amin'ny protocol no permutation ny fifandirana eo amin'ny tolàm mba kely ny tolàm-ny fanaraha-maso (RTS, ny CTS), fa tsy ny data zana-kazo, mba hamonjy ny passante. Manokana, dia misy toerana fiantsonana izay te-mamindra mandefa ny fonosana RTS ny mpandray, izay mangataka ny fahazoan-dalana mba hibodo ny fantsona. Raha ny mpandray dia azo, dia mamaly amin'ny endriny ny CTS, izay vao avy nandray ny mpandefa, manome azy ny fahafahana manomboka ny fampitana ny tahirin-kevitra (mandritra izany fotoana izany activating ny hatry ny fanamafisana) raha tsy misy ny mety hisian'ny ady, satria ny sisa amin'ny nodes izay nandre ny RTS na ny CTS fantatrareo fa ny fantsona atao, ary miditra ny standby fomba tsara ny fotoana (NAV), izay kajiana avy amin'ny vaovao mitondra ny maso boaty. Rehefa hiala aina ny fotoana fa ny nodes izany dia manana zana-kazo mba ho nalefa tany ezaka mba hibodo ny fantsona amin'ny dingana ihany, fa amin'ny fotoana samy hafa (mampiasa ny algorithm ny mimari-droa exponential fihemoran'ny ampiasaina amin'ny CSMA/CD), mba hampihenana ny mety ny ady. Raha, na izany aza, ny roa amin'ireo collide, dia hatao indray amin'ny mihazona, miandry ny kisendrasendra ny fotoana sy ny ξαναπροσπαθούν.
Ny PCF dia tonga dia alefa ao amin'ny voalaza intervals rehefa AP heveriny fa ilaina, raha toa ka.x. ianao dia mba handefa ny fotoana mitsikera ny fampahalalam-baovao mba hahazoana antoka fa tsy hisy ady mandritra ny fotoana. Tany am-piandohana na inona na inona toy izany fe-potoana tsy misy ny fifaninanana, ny AP mandefa ny rehetra ny nodes ao amin'ny toe synchronization (Fanilo), ary avy eo dia mizara ny fotoana fametrahan'entan'ny mpianatra izay ahitana sy manendry ny isaky ny toby fiantsonana ny fiarovana petra-bola boaty izay iray ihany no afaka ataon-drizareo na hahazo angon-drakitra. Ny zana-kazo avy amin'ny node A ho A node B atao na ho azo avy amin'ny ny AP (ao amin'ny boaty Iray) ary avy eo dia avy amin'ny AP ny B (boaty B), na mivantana avy A ny B tany ny petra-bola azo antoka vata ny A. Ny manomboka ny tsirairay slot dia nidika koa amin'ny alalan'ny fandefasana jereo box Fitsapan-kevitra avy amin'ny AP ny node fa manana ny amin'izao fotoana izao ny boaty.
Ny endrika sy ny asa ny protocols an'ny 802.11 ny fikarakarana ho fanohanana ny fivezivezena ny nodes isan-karazany eo BSS mifandray akaiky amin'ny DS. Ny hetsika toy izany no antsoina hoe transduction. Telo karazana ny asa ny fivezivezena dia raisina an-tànana ho an'ny toeram-piantsonana: fifandraisany, indray raha niresaka mikasika, synchronize. Ny fandrindrana dia tanterahana amin'ny alalan'ny ny node-na fotsiny (miandry toe PCF Fanilo avy amin'ny AP) na mavitrika (fandefasana rafitra Fangadiana ny AP) sy mikasika ny fampidirana ny BSS amin'ny fifampiraharahana sy ny initialization masontsivana. Ny re-raha niresaka mikasika mamela ny tetezamita ny gara avy amin'ny iray BSS hafa, ny DS mikarakara mba ho araka ny tokony ho nampahafantarina ny liana AP. Nandritra ny ara dia tsy natolotra tamin'ny toe-javatra, ka ny ambaratonga ambony no tokony manome araka ny tokony ho izy ny fanaterana azy. Farany, ny synchronize azo booted na avy amin'ny terminal na avy amin'ny AP, ary mijery ny famaranana ny anankiray efa voavitrana. Ivelan'ny ny fivezivezena ny mpampiasa, iray hafa mety ho antony mahatonga ny dia ny ambany faneva tsara, izay midika fa ambany ny tahan'ny ny angona fifindran'ny - ao amin'ny BSS, rehefa station fantariny raha misy ny fantsona iray hafa mba hahita AP izay ianao dia hahatratra ny kalitao ambony fifandraisana.
Olana iray hafa dia ny fiarovana ny angon-drakitra. Ny protocols an'ny 802.11 ahitana ny tsy voatery rafitra ho an'ny fanamarinana ny nodes (dia narafitra ho an'ny tambajotra), sy ny tahirin-kevitra fanafenana, antsoina hoe WEP, izay miasa toy izao: rehefa ny fandrindrana ny fiantsonana ao amin'ny BSS, ny node mandefa ny AP fangatahana ho fanamarinana. Ny AP mamaly amin'ny alalan'ny fandefasana azy ny lahatsoratra kisendrasendra fa ny node encrypts, mampiasa fanalahidy izay efa mampihaino ny mpampiasa ny tambajotra an-toerana sy iraisan'ny rehetra sy ny nodes, ary mandefa indray ny access point. Ny AP manamafy fa ny lahatsoratra nahazo araka ny tokony ho voaaro, araka ny zo fototra, ny dikan ' izay naniraka ary hamaly amin'ny fanamafisana ny taratasy fanamarinana, izay manendry ny id ny node (izay lasa fantatra ny hafa nodes). Avy amin'ny fotoana izay, ilay onjam-peo afaka ny fifanakalozana angona ao amin'ny WIFI ny id. Raha ny node maniry ny handao ny tambajotra dia mandefa fangatahana αποπιστοποίησης talohan'ny synchronize. Mba tsy pifandraisan ' ny angon-drakitra mihetsika eo ny tambajotra-dia voaaro amin'ny miafina manan-danja ny 40-kely (ny toy izany koa fa ny fanamarinana), izay dia ampiarahana amin'ny mpamokatra kely ary ny vokany dia miaraka ny tahirin-kevitra amin'ny fampiasana ny lojika XOR (irery Na) mba hahazoana ny fanafenana. Ny mpandray nanaraka ny hanova ny fomba.
Ny firafitry ny endrinyHanova
Tsy vitsy ny tahirin-kevitra amin'ny ny an'ny 802.11 sublevel LLC, na dia ny firafitry ny rafitra toa be dia be, toy ny fitsipika 802.2, fa ny zana-sosona MAC (izay voafaritry ny fifanarahana raha ny LLC) ho fanohanana fanampiny saha ao amin'ny lohapejy ny sehatra ny link angona fifindran'ny. Ireo sehatra mifandraika indrindra amin'ny fanavahana ny mifindra toe eo amin'ny tolàm-ny tahirin-kevitra, ny fitantanana (fangatahana sy ny valin-fifandraisany, επανασυσχέτισης, αποσυσχέτισης, fanamarinana, αποπιστοποίησης, Fanilo) na ny fanaraha-maso (Fitsapan-kevitra, ny RTS, ny CTS, ny fandraisana ho mpikambana, ny faran'ny fe-potoana tsy misy fifaninanana), ary koa ny amin'ny fanohanana ny asa voafaritry ny fifanarahana (WEP, nizarazara ny toe ao sombiny kely rehefa misy tabataba ao amin'ny fantsona, dia tetezamita ho amin'ny node amin'ny fitondrana ny famonjena fomba rehefa nandao foana sns). Koa ny boaty misy ny manara-maso ny vola CRC sy ny hatramin'ny efatra 48-kely (toy ny ao amin'ny Ethernet) adiresy sublevel MAC: adiresy amin'izao fotoana izao ny mpandray, amin'izao fotoana izao ny mpandefa, tany am-boalohany ny mpandray, tany am-boalohany ny mpandefa. Amin'ny efatra ireo adiresy saha izany dia azo atao ny fifanakalozana ny tahirin-kevitra zana-kazo isan-karazany eo amin'ny BSS izay mifandray akaiky amin'ny DS.
Ny protocols ny IEEE an'ny 802.11, izay efa niseho eo amin'ny tsena dia ny manaraka izao:
Mahazatra ny tahan'ny fifindran'ny
Anarana ny tahan'ny fifindran'ny
Isan-karazany ny atitany toerana
An'ny 802.11 1997 2.4 GHz 0.9 Mbit/s 2 Mbit/s IR / FHSS / DSSS ~20 m Ny mahazatra fenitra, ankehitriny dia tsy ampiasaina intsony ao
An'ny 802.11 b 1999 2.4 GHz 4.3 Mbit/s 11 Mbit/s DSSS ~38 m Ny tena nahomby ara-barotra, tracy v. " ahoana no monisipaly WiFi
An'ny 802.11 ny 1999 5 GHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM ~35 m Tsy fantatra ara-barotra noho ny tsy mifanaraka amin'ny an'ny 802.11 b
An'ny 802.11 h 2003 2.4 GHz 19 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM ~38 m Fanoloana ny an'ny 802.11 b lehibe ara-barotra fahombiazana
Any ivelany ireo boky efa naroso, ary ny sasany fanitarana ny azy ireo, izay, na izany aza, tsy mbola ampiharina amin'ny vokatra ara-barotra sy manana mihoatra akademika liana. Ny zava-dehibe indrindra dia:
An'ny 802.11 f na IAPP, izay mamela ny fifandraisana mivantana eo amin'ny isan-AP mba hanafoanana ny fahaverezan ' ny tolàm nandritra ny famindrana. Ny manan-danja ny rafitra dia ampiharina amin'ny alalan'ny fangatahana επανασυσχέτισης.
An'ny 802.11 e, na QoS , izay miezaka mba ho azo antoka tsara ny asa fanompoana ho an'ny fampiharana ny tena-ny fotoana mihazakazaka amin'ny misy WIFI amin'ny manamaivana na ny maximizing ny iray amin'ireo fepetra manaraka ireto: eo ho eo ny fahatarana amin'ny farany, ny salam-fiovana eo amin'ny fanemorana na ny eo ho eo ny tahan'ny fahombiazana ny fiterahana ny tolàm -. Dia manao izany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba fiasa DCF sy PCF ny fomba fiasa EDCF, izay manome laharam-pahamehana ny tolàm-ny tahirin-kevitra arakaraka ny fomba fotoana-dehibe dia ny fanaterana sy ny laharam-pahamehana lehibe indrindra boaty mba manana vintana kokoa mba handresy amin'ny fifaninanana ho an'ny fahafahana hahazo ny nozarain'ny mpanelanelana amin'ny tontolo, ary HCF, izay mametra ny ambony indrindra amin'ny fotoana fanoloran-tena ny fantsona avy amin'ny terminal iray, ny tsirairay avy.
An'ny 802.11 n, izay ny fampiasana ny maro tandrok'ilay (fomba fantatra amin'ny MIMO, Maro Inputs Maro Outputs) no antenaina mba hanome anarana ny tahan'ny fifindran'ny, fara fahakeliny, 108 Mbps. Mifanohitra amin ' ny teo aloha roa dia tsy maintsy manara-penitra tsy ho ela, ary ny famoahana vokatra ara-barotra mifototra amin'ny izany. Eny, karatra wireless tambajotra mifanaraka amin'ny an'ny 802.11 n efa mivoaka eny an-tsena amin'ny ny sasany ny mpamatsy, ary dia mbola tsy finalised ofisialy, fenitra (andrasana amin'ny faran'ny taona 2009).
Wireless Fifandraisana sy ny Tambajotra, Stallings, William, Talohan'izay. Τζιόλα
Solosaina tambajotra, Tanenbaum Andrew S., Ed. Wesley
IEEE AN'NY 802.11 WG, IEEE Std An'ny 802.11-2007 (Fanitsiana ny IEEE Std An'ny 802.11-1999), Fenitra Iraisam-pirenena [fa] ny teknolojiam-Baovao - ny Fifandraisan-davitra sy ny fifanakalozam-baovao eo amin'ny rafitra an-Toerana sy ny tanàn-dehibe tambajotra-Fepetra Manokana - Part 11: Wireless LAN Fitaovana fanaraha-Maso ny fidiran'ny (MAC) sy ara-Batana Sosona (PHY) fepetra, 2007, ISBN 0-7381-5655-8
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.11&oldid=795116"
Dernière modification le 14 Janoary 2017, à 18:09